Waa inuu Daawado Anime ee Gu'ga 2021 - Muuqaalka Cradle
Leave a Comment Must Watch Anime ee Guga 2021
Bandhigyada sida Attack on Titan, Dr. Stone, Wonder Egg Priority, iwm, jiilaalka 2021 waxa uu soo bandhigayaa ururinta koobabka anime ee quruxda badan. Liiska anime-ka ee bilaabi doona baahinta xilli ciyaareedka soo socda ayaa la mid ah mid la yaab leh, haddii aanu ka fiicneyn. Maanta, waxaan soo aruuriyay liiska anime-ka ay tahay in la daawado guga 2021 oo aadan awoodin inaad ku dhaafto.
Boqorka Shaman 2021
Shaman King 2021 dhab ahaantii waa dib u habeyntii asalka ahaa ee Shaman King anime kaas oo la sii daayay ilaa 2001. Anime-gani wuxuu u socdaa inuu soo bandhigo dagaal badan oo cajiib ah oo indhahaaga ku dhejin doona shaashadda. Sidoo kale, Shaman King waxaa lagu xoojiyey istuudiyaha Bridge, si aad u filan karto qaar tayo sare leh. Sheekada anime-kan waxay ku wareegaysaa Shamans - shakhsiyaad awood leh oo awood u leh inay la xiriiraan rooxaanta, jinniyada iyo ilaahyada.
Sida aan loogu yeedhin Demon Lord Season 2
Haddii aad jeceshay xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee harem isekai anime, markaa hubaal waad ku raaxeysan doontaa xilli ciyaareedkan labaad. Sayidkayaga jinni ee xoogga badan ayaa soo laabanaya mar labaad xilli ciyaareedkan oo ay la socdaan Rem iyo Shera. Diablo wuxuu wax badan ka baran doonaa dhammaan xaqiiqooyinka qarsoon ee adduunkan khiyaaliga ah xilli ciyaareedka cusub.
Reer Guuraaga: Megalo Box 2
Qofna run ahaantii ma fileyn inuu arko xilli labaad ee Megalo Box maadaama xilli ciyaareedkii hore uu na siiyay dhamaadka quruxsan. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, taxanahan ayaa weli dhacaya. Laga soo bilaabo trailer-ka, waxaan arki karnaa in xilli ciyaareedkan uu noqon doono mid xiiso leh sida kan ugu horreeya, oo waxay raacaysaa sheekada Joe ka weyn oo ka sii weyn.
Higehiro waxay u egtahay rom-com madadaalo iyo xiiso leh oo soo bandhigi doona sheekada laba qof oo cidlo ah. Yoshida waa shaqaale xafiis oo dhawaan diiday inanta uu jeclaa. Dhanka kale, Sayu waa gabadh dugsi sare oo qurux badan oo ka carartay gurigeedii. Dhacdooyin badan ayaa sugaya labadooda iyagoo isku dayaya inay wada noolaadaan.
Hadda, kani waa jawharad xaqiiqdii iska leh liiskan anime-ka la daawado ee guga 2021! Taageerayaal badan oo anime ah ayaa si aad ah loogu buun buuniyay anime-kan shounen maadaama sheekadiisa uu qoray isla qoraaga qoray Codka Aamusan. Anime-kani waxa uu soo bandhigayaa tacaburrada makhluuqa aan dhiman karin ee dahsoon marka uu isku dayayo in uu ku noolaado Dhulka.
Ha i Caylin Negatoroow
Waxaa laga yaabaa in qaarkiin aad horey uga maqasheen taxanahan sababta oo ah sida ay caan u yihiin walxaha isha. Ha i xoogsheegin, Nagatoro waa anime-nolosha oo qosol iyo jacayl leh oo daba socota sheekadii wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Naoto Hachiouji, kaas oo ay u cagajugleysay gabadh qurxoon oo lagu magacaabo Nagatoro. Nagatoro kaliya waxay jeceshahay u xoogsheegashada senpaideeda siyaabaha ugu naxariista daran ee suurtogalka ah.
Halyeeyga tacliimeed Xilli 5
Liiskan anime-ka ay tahay in la daawado ee guga 2021 waligiis ma dhammayn karin iyada oo aan lagu darin xilliga cusub ee Waxbarashada Hero My Hero. Anime-kani waa hubaal mid ka mid ah taxanaha Shounen casriga ah ee ugu fiican! Hero Academia Xiliga 5 wuxuu kugu ilaalin doonaa cidhifka kursigaaga markaad daawato dhammaan ficilada aadka u daran ee dhacdo kasta.
Waxaan rajeyneynaa inaad maqaalkan ka heshay mid waxtar leh waxaana rajeyneynaa inaad hadhow ku sii socon doonto wax badan, laakiin hadda waa inaad sugtaa. Maalin wanaagsan waad ku mahadsan tahay akhrinta! Waxaad sidoo kale eegi kartaa dukaankayaga hoose.
Tags: 2021macaan 2021 animetowatch animetowatchin2021 mustwatchanime mustwatchanimeofsring2021
Gelitaan Hore Top 10 Fantasy Anime Si Aad U Daawato Netflix
Gelitaanka Xiga Shaashadda Shaashadda Maarso 2021 Khadka tooska ah wuxuu ku darayaa Filim Toos ah oo Tokyo Ghoul iyo qaar kaloo badan!